Shiinaha Knutson steel alwaax gubista godka dabka | THYH
Kuma jiraan: Dabool
Shabaggeedii karinta hagaajin karo, solay swivels 360 digrii
Dusha sare ee mesh sida miiska dhinaceeda
Dhismaha lugta culus
Nooca Badeecada: Godka dabka
Qalabka Dibedda: Birta
Ammaan Loogu Isticmaali Karoolka Alwaax: Laguma saari karo sagxad alwaax ah
Nooca Shidaalka: Qoryaha Gubashada
1. Markuu dabku demiyo, dhuxusha waa qabow, godka dabka dibaddana waa la qaboojiyaa si loo taabto, dambas looga saaro oo si habboon loo tuuro. 2. Ku keydi meel ku dhow carruurta iyo xayawaanka guriga.
Isticmaalka Bannaanka Kaliya
Ammaan u Isticmaal Dusha Sare ee Alwaaxa
Laguma saari karo sagxad alwaax ah
Alaab-qeybiyaha oo Loogu Talo Galay lana Ansixiyey
Dalka Asalka - Faahfaahin Dheeraad ah
Waa maxay Tirada Yar?
Maadaama aan nahay alaab-qeybiye xirfadle ah, waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan ku habboonaanno amarada tirada yar macaamiil kasta. Sida aan ognahay tani waa mid aad muhiim ugu ah iskaashigeena ugu horeeya.Anaguna waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad xulato badeecooyin badan oo kala duwan oo loogu talagalay amarka tijaabada 1aad si aad u tijaabiso suuqaaga oo aad u keydiso qiimaha miraha.
Qaabkee rarka loo heli karaa?
1. Bad ahaan dhanka dekeddaada loogu talagalay 20 ′, 40 ′, 40′H FCL oo loogu talagalay shixnadda LCL.
2. Hawada adoo u raacaya garoonka diyaaradaha ee aad ugu talo gashay shaybaarrada.
3. Adoo si dhakhso leh (DHL, UPS, FEDEX, TNT) albaabkaaga uga soo diraya shaybaar
Ka waran heerka xamuulka ee ku saabsan amarada iyo shaybaarada?
Waad adeegsan kartaa gudbiyaha adiga kuu gaarka ah, ama waxaan ku siineynaa xamuul horay loo sii qadiyay oo aan isbarbar dhigeyno xamuulka ka fiican, waxaan jeclaan laheyn inaan ka caawinno macmiilkeena keydinta wixii kharash ah.
Waqtiga hogaaminta amarka iyo muunadda?
Amarada wakhtiga hogaaminta: badanaa 30-40 maalmood
Muunado ayaa hogaaminaya waqtiga: badanaa 7-10 maalmood
Qaabkee lacag bixintu u shaqeyn kartaa?
1.Marbaro (wanaagsan waxay leeyihiin kayd, qiime dalab ka yar USD10.00).
2.T / T (30% dhigaalka ka hor, 70% dheelitir ah oo ka dhan ah nuqulka Bill of Lading).
3.L / C (LC lama huraan karo marka la eego, qadarka dalabku wuxuu ka badan yahay USD30000).
Goorta la helo jawaabta.
Waxaan balanqaadeynaa inaan kusoo jawaabno 12 saacadood.
Miyaad sameysaa alaabada OEM oo waxaad leedahay lahaansho gaar ah?
Ku soo dhawow inaad noo soo dirto nashqaddaada haddii aynaan lahayn naqshadda aad rabto.Waxaan jeclaan lahayn inaan naqshaddaada u soo qaadno mid dhab ah oo kharashkeedu hooseeyo.
Naqshadeynta qaar ee ka imanaya macaamiisha, waxaan u soo saarnaa oo u iibinnaa macaamiil gaar ah si loo ilaaliyo xuquuqda macaamilka.
Waa maxay Awoodda Qingdao TIANHUA?
1. Xirfadle: Kooxda khibrada leh ee diirada saaraya horumarka iyo soosaarida in ka badan 20 sano ayaa kuu adeegaysa, waxaan tixgelinay macaamiisha aysan tixgelin siin oo aan ka dhignay waxa uu macaamilku doonayo.
2. Tartan: Kooxda xirfadleyda nashqadeynta ah waxay leeyihiin cilmi baaris badan oo suuqa waxayna ka sameeyaan alaabooyin kala duwan sanad kasta si ay u sii ahaadaan badeecada macaamiisha mid cusub si kor loogu qaado tartanka suuqa.
Hore: Derbyshire steel Wood gubanaya godka dabka
Xiga: Habee Laabista Birta iyo Qalabka Laser Jarida Laser Qalabka Beenta Birta
Bannaanka Alwaaxda Gubashada Dabka